भाग्यमा छ भने भगवानले २० करोडले हान्छन्, टिनको छानो फु’टाएर घरभित्र आउँछ धन - समृद्ध नेपाल
काठमाडौं । मानिसको भाग्य कतिबेला बदलिन्छ पत्तै हुँदैन । मानिसहरु रातारात करोडपछि हुन्छन् । हिन्दीमा एउटा चर्चित उखान छ ‘उपरवाला जब देता है तो छप्पर फाड के देता है’ अर्थात भगवानले दिए भने घरको छानो फुटाएरै दिन्छन् ।
यस्तै भएको छ इण्डोनेसियाका एक युवकसँग । भगवानले उनलाई यति धेरै धन दिए जसको उनले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । र, सबैभन्दा रोचक त उनलाई भगवानले यति धेरै धन उनको घरको छानो फु’टा’एरै दिए ।
बीबीसी इण्डोनेसियाको रिपोर्टअनुसार जोसुआ हुतागालुङ नामका ३४ वर्षका ती युवकलाई बेलायती मिडियाले फोन गरेर ‘नयाँ करोडपति’ भन्दा उनी चकित परे । खासमा गएको अगष्ट महिनामा उनको घरमा आकाशबाट एउटा ढुंगो खसेको थियो । त्यो ढुंगो उनको घरको छानो फु’टा’उँदै खसेको थियो । अहिले त्यो ढुंगाको मूल्य एक अनलाइन प्लेटफर्ममा प्रतिग्राम ७५७ पाउण्ड परेको छ ।
त्यो ढुंगो १ किलो ८०० ग्रामको छ जसको मूल्य १.४ मिलियन पाउण्ड (२० करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी) पर्न जान्छ । जोसुआ मानिसको लाश राख्ने काठको कफिन बनाउने व्यक्ति हुन् । उनले त्यो ढुंगा २० करोड इण्डोनेसियन रुपीमा बेचेको उत्तरी सुमात्राका एक पत्रकार देदी हेर्मावानलाई बताएका थिए जसले बुधबार बीबीसी इण्डोनेसियालाई यसको जानकारी दिएका थिए ।
उनले त्यो ढुंगा सुमात्रामा बस्दै आएका अमेरिकी नागरिक जारेड कोलिन्सलाई १७ अगष्टमा बेचेको पनि बताएका थिए । जोसुआले ढुंगाको मूल्य २०० मिलियन रुपी र ढुंगाले भ’त्का’एको घर मर्मत गर्न १४ मिलियन रुपी गरी २१४ मिलियन रुपी पाएको बताएका थिए । उनले यो रकम लिएको प्रमाण दिन भने अस्वीकार गरे ।
जोसुआमा अनुसार उनले आफ्नो घरमा खसेको सबै ढुंगा बेचेका छैनन् । उनले कोलिन्सलाई १ किलो ८०० ग्राम बेचे तर उनको घरमा ख’से’को ढुंगाको तौल २ किलो २०० ग्राम थियो ।
बेचेर बाँकी रहेका टुक्रा आफन्तहरुमा बाँडिएको उनले बताए । ‘मैले ५ ग्राम पाएँ’ उनले भने । उनले बाँकी रहेको टुक्रा नबेच्ने बताए । उनले बाँकी रहेको ५ ग्राम सम्झनाको लागि राख्ने बताए । ‘५ ग्राम सानो टुक्रा हो’ उनले भने ‘यसलाई सम्झनाको लागि रहन दिउँ ।’
नेपालीहरुलाइ आनन्द लिने तरिका नै थाहा छैन एकचोटी यो पढ्नुहोस अनि तरिका थाहा पाउनु होस् !
ड्युटी सकिएको भन्दै पाइलटले बीचमै विमान उडाउन नमानेपछि…
फोटोमा OPEN लेख्नुहोस सबै खुल्ने छ !
के गर्भवती’ महिलालाई पनि सम्पर्क राख्ने इच्छा हुन्छ ? पुरा जान्नको लागि फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् !
श्रीमानलाइ मन लागेको बेला मात्र गर्नु हुन्छ मलाई लागेको बेला गर्नु हुना ! तेही भएर मेरो इक्षा पुरा हुदैन !
यी हुन् बच्चा जन्माउने पहिलो पुरुष, तीन पटक भए सु; त्केरी पूरा पढ्नुहोस्
जीवन साथी तिम्रो हुने मन छ भन्दै भिडियो हाले पछि भिडियो सहित !
कस्तो अवस्थामा शारि”रीक सम्पर्क गर्नु हुँदैन ?
राति भिडियो कलमा मज्जाले बोल्नु चाहानु हुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस नम्बरको लागि मेरो फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् !
मलाई मेरो बुडाकोले पुग्दैन मेरो मन बुझाउनेलाइ दिन्छु ५ लाख नम्बर सहित !
बट्टाईको अण्डा खाँदा हुने फाईदाहरु यस्ता छन् : हेर्नुहोस्…
कमेन्टमा यो फोटोलाइ छुएर Play लेख्नु होस् अनि भिडियो खुल्ने छ !